Alakamisy, May 31, 2007 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Misy lafin-javatra roa lehibe resahina ao TED fampisehoana avy amin'i Microsoft izay revolisionera. Ny voalohany dia ny angon-drakitra azo aseho amin'ny efijery, na inona na inona vahaolana amin'ny efijery, ary ampiasao ny loharano ilaina mba hampisehoana tsara ny valiny. Amin'ny ankapobeny, manome ny halalin'ny sary izy io, tsy ny haavony sy ny sakany ihany.
Mety hanova be ny zavatra niainan'ny mpampiasa izany! Ny faharoa dia 'hyperlinking' sary amin'ny tranonkala ary Photosynth ny fahaizana manjaitra azy ireo miaraka ary manome fomba fijery refy. Wow.
Tadiavina: Extraordinaire teknolojia
Midika ve ny fijanonana ao an-trano fa mijanona ao an-trano?